မီး အာမခံထားတဲ့အချိန်မှာ ရေကြီးရေလျှံဆိုတဲ့ အာမခံ အကာအကွယ်ယူထားမယ် ဆိုရင် ဒါကိုပါ ထည့်ပြီ?? - Yangon Media Group
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစန္ဒာဦး နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
နိုင်ငံတကာတွင် နိုင်ငံပိုင်အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကအာမခံလုပ်ငန်းများမှာ တွင်ကျယ်လျက်ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူအများစုမှာ အာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမှုရှိမနေဘဲ အာမခံလုပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်ခြင်း မရှိသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင်များက သုံးသပ်ထားပြီး လက်ရှိကာလတွင်လည်း မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအနေနဲ့ အာမခံအမျိုးအစားအသစ်များ တိုးချဲ့ရန် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ နိုင်ငံအတွင်း အာမခံလုပ်ငန်းများ ကျယ်ပြန့်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဒေါက်တာ စန္ဒာဦးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မေးမြန်းထားသည်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ မြန်မာ့အာမခံအပါအဝင် တခြားပုဂ္ဂလိကအာမခံတွေအနေနဲ့ရော အာမခံအမျိုးအစားအသစ်တွေ ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ ရှိပါသလား။
ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာ လုပ်ခဲ့တာကတော့ ပြည်သူ ပြည်သားတွေအတွက် ကာလတို အသက်အာမခံလုပ်ခဲ့ တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အသစ်လုပ်မှာတွေရှိတယ်။ အဲဒါ တွေကတော့ ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုရင် အရင်တုန်းက ဖြန့် ပြီးသားပေါ့။ အဲဒါကို New Version ပေါ့။ ပုံစံပြောင်းပြီး ဖြန့်ဖို့ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာမခံပေါ့။ အိုးအိမ်တွေအတွက် လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ နောက် ပြီးတော့ ကျွဲနွားတို့ အာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးကတော့ Review လုပ်နေတဲ့ Process ဖြစ်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ မကြာမီ ပြည်သူပြည် သားတွေအတွက် ပေါ်ထွက်လာမှာပါ။ မြန်မာ့အာမခံရော၊ ပုဂ္ဂလိကအာမခံရော အကုန်လုံးအတူတူလုပ်မှာပါ။
ကျန်းမာရေးအာမခံကို New Version နဲ့က ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်မှာလဲ။
အဲဒါကို အဓိက,ကတော့ အပိုင်းလေးတွေတော့ခွဲထားတာပေါ့လေ။ ဥပမာဆိုရင် အခြေခံလူတန်းစားတွေ ရှိမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်တို့ ရှိမယ်။ နောက် ဝင်ငွေမြင့်အဖွဲ့ ရှိတယ်။ နောက် သက်ကြီးအဖွဲ့ ပေါ့။ အဲဒါတွေအတွက်ကို သူတို့နဲ့ကိုက်မယ့်ပုံစံ Cover တွေ ထည့်ပေးထားတာပေါ့။ အခြေခံလူတန်းစားတွေဆိုရင် ၅ဝဝဝ လောက်နဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်နိုင်မယ်။ အဲဒါဆိုရင် Accidental Death လို့ခေါ်တဲ့ မတော်တဆ သေဆုံးမယ်။ ဒီ Cover ပါမယ်။ နောက် စည်းကမ်းတွေ ပေါ့။ ပြင်ပလူနာအနေနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် အကာအကွယ် လေးတွေ ပါမယ်။ နောက် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်တို့ ဝင် ငွေနိမ့်အဖွဲ့တွေကျရင်လည်း သူတို့လည်း သောင်းဂဏန်း လောက်နဲ့ အာမခံအကာအကွယ်ရမယ်။ ဒါ Operation တွေပါတွေ ခွဲလို့ရမယ်။ In Patient အနေနဲ့ ဆေးရုံမှာ တက်ရင်လည်း Cover ပါမယ်။ နောက် ဝင်ငွေမြင့်ကတော့ နိုင်ငံခြားကို ဆေးသွားကုမလား အဲဒါတွေအတွက်လည်း သိန်းဂဏန်းလောက်နဲ့ များလည်းမများတဲ့ တစ်သိန်းကျော် လောက်ပေါ့။ အခုကတော့ အတိအကျတော့ မထွက်သေးဘူး။ တွက်တော့ တွက်ချက်ထားတယ်။ ဒါတွေလည်း တရားဝင် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်ကျရင် မီဒီယာတွေခေါ် ပြီးတော့ အသိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီမီယံနှုန်းထားလည်း ပြောင်းမယ်။ ကာကွယ်ပေးမယ့် Cover တွေလည်း တိုး မြှင့်ပြီးတော့ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ထားတော့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းအနေနဲ့ လျော်ရတာတွေ ရှိလား။ ရှိရင် သိပါရစေ။
အခု လျော်နေရတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် သူတို့က တကယ်လို့ မီးအာမခံထား တဲ့အချိန်မှာ ရေကြီးရေလျှံဆိုတဲ့ အာမခံအကာအကွယ်ယူထားမယ်ဆိုရင် ဒါကိုပါထည့်ပြီးတော့လျော်တာပေါ့။ နောက်ပြီး သက်သက်အနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ သယ်ယူ ပို့ဆောင်မယ်။ ရေကြီးတဲ့အတွက် သင်္ဘောတွေနစ်တယ်။ ဝမ်းဗိုက်တွေ ပေါက်တယ်ဆိုရင် သင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအာမခံထားတယ်ဆိုရင် ဒါတွေကိုလည်း လျော် ပေးရတယ်။ လျော်ရတာတော့ ကုမ္ပဏီအလိုက်တော့ရှိကြတယ်။ မြန်မာ့အာမခံကတော့ အများကြီး လျော်ထားပါတယ်။ ပမာဏကတော့ အတိအကျတော့ မှန်းဖို့နည်း နည်းခက်တယ်။ အားလုံးပြီးမှပဲ ပြန်ပေါင်းမှာပေါ့။ မိုးတွင်း ပြီးရင်တော့ ပြန်ပေါင်းမှာပါ။ နိစ္စဓူဝကတော့ လျော်ကြေး တွေ တောက်လျောက်လျော်ပေးနေပါတယ်။ မြန်မြန်လည်း လျော်ပေးနေပါတယ်။
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုထဲကနေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှု အာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ နိုင်ငံတော်ပိုင် အာမခံပေါ့။ မြန်မာ့အာမခံအပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကအာမခံ ၁၁ ခုပေါ့။ စုစု ပေါင်း ၁၂ ခု ရှိပါတယ်။ အားလုံးကလည်း မော်တော်ကား နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အာမခံတွေ အလုံးစုံ မော်တော်ယာဉ် အာမခံပေါ့။ အဲဒါကို ကုမ္ပဏီ ၁၂ခု အကုန်လုံးကို ရောင်းပါတယ်။ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံကိုတော့ မြန်မာ့အာမခံကနေပဲ တာဝန်ယူပြီးတော့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ဒါကလည်း တာဝန်အရမ်းကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဂျပန် နိုင်ငံမှာတောင် အမြတ်ယူလို့မရဘူး။ နိုင်ငံတော်ကပဲ လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမှာလည်း အဲဒီလိုပဲ အလုံးစုံ မော်တော်ယာဉ်အာမခံ ထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကား အ ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားမယ်၊ သူတစ်ပါးကို ခိုက်မိမယ်၊ သူတစ်ပါး ဒဏ်ရာရတယ် အဲဒီလိုမျိုးကိစ္စရပ် တွေမှာလည်း ဒီအာမခံကုမ္ပဏီတွေက အလုံးစုံမော်တော် ယာဉ်အာမခံကို ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပျက်စီးမှုတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်ပေးတာတွေ၊ လျော် ကြေးပေးတာတွေကို လုပ်ပေးနေပါတယ်။
လုပ်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး သီးနှံအာမခံ အခြေအနေကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီးနှံအာမခံကတော့ ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပူးတွဲပြီးတော့ Pilot သဘောပေါ့။ စမ်းသပ် လုပ်ဆောင်နေတယ်။ အဓိကကတော့ သီးနှံအာမခံမှာမှ ရာသီဥတုညွှန်းကိန်းပေါ့။ ဒါကို အဓိကထားပြီးတော့လုပ်မှာ။ ရာသီဥတုညွှန်းကိန်းအာမခံပေါ့။ အဲဒါကတော့ မိုးလေဝသပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပေါ့။ မိုးလေဝသနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ မိုးရေချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ လက်မတစ်ခုသတ်မှတ်မယ်။ အဲလက်မထက်များမယ်။ ရေကြီး ရင် လျော်မယ်။ သတ်မှတ်တဲ့ မိုးရေချိန်အောက်ကိုရောက်လို့ မိုးခေါင်တယ်ဆိုရင်လည်း သီးနှံမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း တစ်လက်မဆိုရင် လျော်ကြေး ဘယ်လောက်ပေါ့။ အဲဒီလိုဆိုရင်လည်း တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် အများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီလို ရာသီဥတုညွှန်းကိန်း အာမခံထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အာမခံထားတဲ့လယ်ကို အပေါင် ပြုပြီးတော့ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တို့ကနေပြီးတော့ ငွေချေးမယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်း တွေကို ဆက်ပြီးတော့ တိုးချဲ့နိုင်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံအသင်းကနေပြီးတော့မှလဲ အသင်းနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ဒါကိုလည်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်း ပြီးတော့ စမ်းသပ်တဲ့ကာလလုပ်ပါမယ်။ အခုကတော့ ဆွေးနွေးနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတိအကျကတော့ မဆုံး ဖြတ်ရသေးဘူး။ ဒါကိုလည်း စနစ်တကျနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ မြန်မြန်လေး ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်အောင် အာမခံအသင်းကနေပဲ ဦးဆောင်ပြီးတော့ လုပ်သွားမှာပါ။ ၂ဝ၁၉ထဲမှာ တော့ တော်တော်များများ ပြီးမယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။ ရှေ့နှစ်ထဲမှာပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်း အာမခံလုပ်ငန်းတွေက အမြတ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုရှိသလဲ။ အရင်တုန်းကတော့ ရတဲ့နှုန်းထားကို ကြော်ငြာတာရှိခဲ့တယ်။
အာမခံလုပ်ငန်းရဲ့ သဘောကတော့ လူတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းရဲ့ အန္တရာယ်တွေကို အာမခံကုမ္ပဏီဆီမှာ လာပြီးတော့ စုထားတဲ့သဘောပေါ့။ ဥပမာ လူ ၅ဝရှိတယ်။ ကားတွေ ၅ဝလုံး ပိုင်တယ်။ အဲဒါတွေဆိုရင် သူတို့က လာပြီးတော့ တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ကားက သိန်း၁ဝဝ တန်ရင် နှစ်သိန်းပတ်ချာလည်လောက်။ အဲဒါကို နှစ်သိန်း နှစ်သိန်းနဲ့ လာစုထားတာပေါ့။ အဲဒီ ၅ဝ စလုံးကတော့ ယာဉ်တိုက်မှုကြီး ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ တစ်ယောက်နှစ် ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ၄၈ယောက် အတွက်ကတော့ အာမခံကုမ္ပဏီက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြတ်တော့ရှိတယ်။ တကယ်လို့ အကြီးအကျယ်ဆိုရင် နိုင်ငံနဲ့တစ်ဝန်း ရေ ကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်လုံး ပြန်ပြီး တော့ လျော်ပေးရတာပေါ့။ အာမခံသဘောက မြတ်လား ဆိုရင်တော့ မြတ်တယ်။ အဲဒါကတော့ Risk ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်မြတ်သလဲဆိုတာ ပြော ဖို့တော့ခက်တယ်။
အာမခံသင်တန်းကျောင်းလုပ်ဖို့ကရော ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ သိပါရစေ။
အခုကတော့ အသင်းကပဲ ကြီးမှူးပြီးတော့ သင်တန်းမျိုးစုံကို တတ်နိုင်သမျှ မပြတ်တမ်း ပေးနေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကတော့ အာမခံအသင်းရဲ့ နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘဏ်သင်တန်းကျောင်းလိုပဲ အာမခံသင်တန်းကျောင်းထောင်ဖို့ပါ။ ထောင်ဖို့ဆိုတော့ ဒါနဲ့ပတ် သက်ပြီးတာ့လုပ်ရမယ့် အသေးစိတ်တွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။ ဖြစ်တာတော့ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်နှနှစ်အချိန်ယူရမလဲဆိုတာတော့ ရှိတဲ့ အရင်းအနှီး၊ လူအင်အား၊ Resources အကုန်လုံးအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့မှ ဖြစ်လာမှာပါ။ မြေနေရာကတော့ မရသေးပါဘူး။ အခုတော့ ရှာဖွေဆဲပါ။ သင်တန်းကျောင်းကိုတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ အရင်ဆုံး ဖွင့်ဖြစ်ပါမယ်။ နောက်ပိုင်း တိုးချဲ့ပြီးတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို အင်အားရှိရင် ရှိသလို သွားပါမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အာမခံအကာအကွယ်မရတဲ့သူက အများကြီး ရှိနေတယ်။ သူတို့က နည်းပညာတွေပါတယ်။ ငွေအရင်းအနှီးပါလာရင် အာမခံအကာအကွယ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ အာမခံအကာအကွယ် ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ နိုင်ငံခြားအာမခံတွေ လာမယ်ဆို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီမှာက နည်းပညာလိုတယ်။ အရင်းအနှီးတွေလိုတယ်။ သူတို့ရောက်လာရင် ကျွန်မတို့ကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ပါပဲ။ အခုဆိုရင်အာမခံထားရှိမှုက အင်မတန်နည်းပါတယ်။ GDP မှာဆို ဝ ဒသမ ဝ၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အာမခံကရှိတယ်။ အသက်အာမခံက လူဦးရေရဲ့ ဝ ဒသမ ဝ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ။ အသက်အာမခံကလည်း အင်မတန်နည်းတယ်။ နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့မှာနည်းပညာပါတဲ့အတွက် မြန်မြန်ကြီးရောက်သွားမယ်။ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိလာမယ်။ ယှဉ်ပြိုင်ဘက်တွေများလာပြီဆိုရင် ဈေးနှုန်းလည်းကျသွားမယ်။ Product ကလည်း ပိုပြီးအရည်အသွေးကောင်းတာကို ရွေးလို့ရတယ်။ ဒါကတိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတယ်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခမှာ ဘက်လိုက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ
လေ့လာမှုတွေ လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မသင်ပေးရဘူးဆိုတဲ့ - မြေ
ကျောင်းသားနှင့် မိဘများထံမှ ငွေကြေးမကောက်ခံရန် ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
ကယ်လီဖိုးနီးယားတောမီးလူနေအဆောက်အအုံများကို ခြိမ်း ခြောက်နေ
အီဂျစ်နိုင်ငံ ဆိုင်းနိုင်း ကျွန်းဆွယ်ရှိ ဗလီတွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး အနည်းဆုံး လူ ၂၃??